Shiinaha 10KV-500KV Waxsoosaarka iyo Warshada Warshada |Tower XY
Dhismaha XYWaa shirkad hormuud u ah khadka gudbinta danab sare ee koonfur-galbeed ee Shiinaha. La aasaasay 2008, sida wax soo saarka iyo la-talinta shirkadda berrinkii Electric iyo Isgaarsiinta Engineering, waxa ay siinaysay xal EPC baahida sii kordhaysa ee Gudbinta iyo Qaybinta (T & D) qaybta ee gobolka.
Ilaa 2008, munaaradaha XY waxay ku lug lahaayeen qaar ka mid ah mashaariicda dhismaha korontada ee ugu weyn uguna adag ee Shiinaha.
Kadib 15 sano oo koritaanka joogtada ah. waxaanu ku bixinaa adeegyo kala duwan oo ka mid ah warshadaha dhismaha korontada oo ay ku jiraan naqshadaynta iyo bixinta gudbinta korontada iyo qaybinta iyo qaybinta korontada.
munaaradda gudbinta birta xaglaha ah
tiirka gudbinta korontada
munaarad shabag ah oo wareeg ah
munaaradda shalash laba wareeg
Tayada galvanizing Hot-Dip waa mid ka mid ah xooggayaga, Maamulahayaga Mr. Lee waa khabiir ku takhasusay goobtan oo sumcad ku leh Western-China.Kooxdayadu waxay khibrad balaadhan u leeyihiin habka HDG waxayna si gaar ah ugu fiican yihiin maaraynta munaaradda meelaha daxalka sareeyo.
Heerka galvanized: ISO:1461-2002.
Khadka Gudbinta Qalabka Gaarka ah
Magaca alaabta munaaradda khadka gudbinta
Heerka korantada 10KV-500KV
Walxaha ceeriin Q255B/Q355B/Q420B
Daaweynta dusha sare Dheef kulul galvanized
Dhumucdiisuna galvanized celceliska dhumucda lakabka 86um
Waqtiga nolosha In ka badan 30 sano
Heerka wax soo saarka GB/T2694-2018
Heerka galvanizing ISO1461
Heerarka alaabta ceeriin GB/T700-2006, ISO630-1995, GB/T1591-2018;GB/T706-2016;
Halbeegga xiraha GB/T5782-2000.ISO4014-1999
Heerka alxanka AWS D1.1
Heerka EU CE: EN10025
Heerka Ameerika ASTM A6-2014
Golaha Tower & Kormeerka
XYTower waxay leedahay nidaam tijaabo ah oo adag si loo hubiyo in dhammaan alaabada aanu soo saarno ay tayo leeyihiin.Habka soo socda ayaa lagu dabaqaa socodka wax-soo-saarkayaga.
Qaybaha iyo Taarikada
1.Halabuurka Kiimikada (Ladle Analysis)2.Tijaabada Xasilloonida3.Laabi Tijaabooyin
1.Tijaabada rarka caddaynta2.Tijaabada Xoog-Xansiga ugu dambeeya
3.Tijaabada xoogga ugu dambeysa ee culeyska hoostiisa
4.Tijaabada qalooca qabow5.Imtixaan adag6.Tijaabada galvanizing
Dhammaan xogta imtixaanka waa la duubay waxaana loo sheegi doonaa maamulka.Haddii wax cillado ah la helo, alaabta waa la hagaajin doonaa ama si toos ah ayaa loo xoqi doonaa.
Hore: Guyed Mast Communication Tower
Xiga: 3M-150M Taawarrada Isgaarsiinta